कामना सेवा विकास बैंकको १०७औं शाखा काठमाण्डौको भङ्गालमा
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले काठमाण्डौ जिल्लाको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित भङ्गालमा आफ्नो १०७ औ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेल तथा बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले संयुतm रुपमा शाखाको उद्घाटन गरे । कारोबार शुभारम्भ समारोहमा बैंकका संचालक...
कामना सेवा विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा पुस १७ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट मिति र स्थान तय गरेको छ । बैंकको हिजो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो पुस १७ गते काठमाण्डौको डिललीबजारस्थित अमृतभोगमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा विशेष अजेन्डा रुपमा राखिने कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र इजाजतपत्र प्राप्त अन्य...
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा गत वर्षका लागि १७% लाभांश प्रस्ताव
काठमाण्डौ । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको हिजो बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्तापुँजी ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँको कुल १७ प्रतिशतले हुन आउने ९ करोड ३ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरको लभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशमा...
गरिमा विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा मंसिर २७ गते, मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रिया थाल्ने
काठमाण्डौ । मर्जरको मुख्य अजेन्डासहित गरिमा विकास बैंकले आफ्नो तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । जसअनुसार बैंकको वार्षिक साधरणसभा यही मंसिर २७ गते पोखराको होटेल पोखरा ग्रान्डमा आयोजना हुने भएको छ । सभामा गरिमा विकास बैंक र...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको खुद नाफामा ६४%को छलाङ, रिजर्भमा २१.३२%ले वृद्धि
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा गत वर्षको तुलनामा ६४ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । गत वर्ष बैंकले ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा ७ करोड ८८ लाख...
महालक्ष्मी विकास बैंकको खुद नाफा रु. १०.६८ करोड, ईपीएस रु. १३.९२
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत वर्षको तुलनामा १.१२ प्रतिशतले खुद मुनाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष बैंकले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकले वितरणयोग्य...
गरिमा विकास बैंकको खुद नाफा २१.१४%ले बढ्यो, ईपीएस रु. २५.१२
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले गत वर्षको तुलनामा २१.१४ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको हो । गत वर्ष बैंकको खुद नाफा १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा वितरणयोग्य मुनाफा ६ करोड ३...
देव: विकास बैंकको खुद नाफामा १८.५३%ले बढ्यो, रिभर्ज २१.६०%ले घट्यो
काठमाण्डौ । वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको देवः विकास बैंक लिमिटेडको खुद नाफा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १८.५३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत वर्ष बैंकले खुद नाफा ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
पोखरामा ग्रीनका थप दुई शाखा
काठमाण्डौ । पोखरामा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । पोखराको सभागृहचोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले वुधवार कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका भित्र थप दुई शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले पोखराको शितलादेवी र छोरेपाटनमा शाखा विस्तार गरेको हो । शितलादेवी शाखा कार्यालयको सुभारम्भ...
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३४.९८ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिमा ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा बैंकले ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकले सञ्चालन...
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट गण्डकी विकास बैंकले शेयरधनीलाई १९ दशमलव ३१ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले आगामी जेठ २५ गतेका लागि साधारण सभा आह्वान गरेको छ । चुक्ता पूँजी २ अर्ब ३० करोड ४९ लाख ७ हजार ७ सय ५० को १९ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ५० लाख ९२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ...
बुधबारदेखि राबा बैंकसँग बिलय हुन लागेको एनआइडीसीको नाफामा किन गयो भीषण पहिरो ?
काठामाडौँ । आगामी वैशाख १९ बाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग एकीकृत कारोबार शूरु गर्ने निर्णय गरेको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफामा चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा उच्च गिरावट आएको छ । यस अवधिमा बैंकको नाफामा ७८ दशमलव ८८ प्रतिशतले कमी आएको सोमबार प्रकाशित वित्तीय विवरणले देखाएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा २५ करोड ६४ लाख खुद नाफा आर्जन...
काठमाडौँ । मोरङको विराटनगरमा मूख्य कार्यालय रहेको सप्तकोशी विकास बैंकले सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । वैशाख १५ मा सम्पन्न बैंकको साधारण सभाले बैंकको सेवा क्षेत्रलाई लाई विस्तार गर्दै प्रदेश १ का थप दुई जिल्लामा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । झापा र सुनसरी बैंकले सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार ख...
अपी पावरको नाफामा उछाल, कति कमायो ?
सेयर बजारमा गृहिणी : कसैले बनाए घर, कोही गाडी किन्ने सोचमा
आरएसडीसी लघुवित्तको नाफा १३.४८% ले बढ्यो, ईपीएस रु. १४.२९
नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा रु. ९४ करोड बढी, ईपीएस पनि बढ्यो
आजसम्म कायम सेयरधनीले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ५१% लाभांश पाउने
आजबाट नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन खुल्यो
सवा २ वर्षमै ३७ गुणाले बढे अनलाइन कारोबारी, जनवरीमै थपिए ४६ हजार
सानिमा बैंकको शाखा ललितपुरको कुपण्डोलमा
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ सूचीकरणमा ढिलाइ हुनसक्ने, यस्तो छ कारण